ओली संग पार्टी एकता गर्दै ठाकुर समूह,आफु पक्षका सांसद सहित खुलेरै ओली तिर ! - News20 Media
April 30, 2021 N20LeaveaComment on ओली संग पार्टी एकता गर्दै ठाकुर समूह,आफु पक्षका सांसद सहित खुलेरै ओली तिर !
काठमाडौं – जनता समाजवादी पार्टी जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले लुम्बिनीका नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई सांसद र पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गर्ने निर्णय फर्जी भएको बताएका छन् ।
बिहीबार दिउँसो लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरी जसपा सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे पदमुक्त भएको जानकारी गराएको थियो ।
नेता महतोले सांसद पदमुक्त गर्ने निर्णय फर्जी भएको भन्दै स्वीकार नगर्ने बताए । ‘यो फर्जी कसले गर्‍यो ? पार्टीको त बैठक नै बसेको छैन । दुनियाँलाई थाहा छ नि महतोले भने ।
प्रदेशसभा सचिवालयले प्रकाशित गरेको सूचनामा भने जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ को उपदफा ९५० बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गरेको सूचना जसपा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले दिएको उल्लेख गरिएको छ ।
महतोले लुम्बिनीका सभामुखले गलत काम गरेको बताए । ‘फर्जी काम भयो, सभामुख कस्तो मान्छे हो । कन्फर्म त गर्नुपर्छ नि’, महतोले भने । कम्युनिष्टहरुले आफ्नो पार्टी गोलमाल बनाएपछि जसपाभित्र पनि त्यही गर्न लागेको उनले बताए ।
६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका चार सांसदलाई त्यसै दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री बनाएका थिए ।
छुट्टै पत्र लेख्दै ठाकुर
जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट नभएको बताएका छन्।
ठाकुरले बिहीबार प्रदेश सभामुखलाई पत्र पठाउँदै मन्त्री बनेका चार सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट नभएको जनाएका हुन्। पूर्व राजपा नेपाल र पूर्व समाजवादी पार्टीका प्रदेश समितिको समायोजन हुन
नसकेको र संसदीय दललाई नै प्रदेश सभा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न निर्देशन दिएको ठाकुरले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। ६ सदस्यीय प्रदेश सभा संसदीय दलमा चारजना पूर्व राजपा पक्षका छन्।
उनीहरुलाई उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षको कार्यकारिणी समितिको निर्णय अनुसार प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएको छ। पार्टी संसदीय दलको पत्र अनुसार प्रदेश सभा सचिवालयले चार जना पदमुक्त भएको सूचना बिहीबार टाँस गरेको छ।
पदमुक्त हुनेमा सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा र कल्पना पाण्डे रहेका छन्। उनीहरुले पार्टीको निर्णय विपरित मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।